Kaddib saxiixa David Alaba, ka boggo todobada ciyaaryahan ee u soo wada ciyaaray Kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich – Gool FM
Haaruun May 29, 2021
(Madrid) 29 Maajo 2021. Real Madrid ayaa ku dhawaaqday goor sii horreysay inay dhammeystirtay saxiixa daafaca reer Austria ee David Alaba, kaasoo ka yimid Kooxda Bayern Munich.
Waxaa xusid mudan in Alaba uu si bilaash ah ugu soo dhaqaaqay Real Madrid kaddib markii uu dhammaaday qandaraaskiisa Bayern Munich, wuxuuna diiday dhammaan dalabyo cusub uu qandaraaska ugu kordhin lahaa Bayern.
David Alaba ayaa ku dhowaad 11 sano la qaatay kooxda koowaad ee Bayern Munich, isagoo kula guuleystay Bundesliga 10 jeer, taasoo ka dhigeysa inuu yahay ciyaaryahanka tiradii ugu badneyd ku guuleystay taariikhda, wuxuuna kala siman yahay Thomas Müller.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa ka hor Alaba todobada ciyaaryahan ee u soo wada ciyaaray Kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich:-
Xiddigii hore ee xulka qaranka Jarmalka ayaa Real Madrid uga soo biiray Bayern Munich kaddib markii uu ku soo guuleystay Koobkii Adduunka ee 1974-kii.
Xiddigan reer Brazil ayaa qeyb ka ahaa shaxdii Kooxda Real Madrid kula guuleystay Koobkoodii todobaad ee Champions League.
Xiddigan reer Holland ayaa labo xilli ciyaareed ku soo qaatay Kooxda Real Madrid ka hor inta uusan ku biirin Bayern Munich.
Waxa uu laacibkan reer Turki shan sanadood oo qurux badan ku qaatay Bayern Munich, laakiin waxa uu ku dhibtooday waayihiisii kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Xiddigan reer Jarmal ayaa haatan qeyb ka h kooxda Real Madrid, laakiin waxaa xusid mudan inuu kaga soo biiray naadiga Bayern Munich sanadkii 2014-kii.
Kaddib markii uu shan sanadood oo qurux badan uu ku qaatay Real Madrid, waxa uu xiddigan reer Spain xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyey Bavaria.
Laacibkan khadka dhexe oo ay milkiyaddiisa iska lahayd Real Madrid ayaa amaah ugu soo ciyaaray Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich, balse hadda waxa uu ka xamaashaa horyaalka Premier League, isagoo qeyb ka ah Naadiga Everton.
RASMI: Laacibka bisha ee Premier League oo lagu dhawaaqay... (+ xiddigaha lagu garaacay)